ရေလှူ ခြင်း ကြောင့် အ ကျိုး ထူး ခဲ့သူ(ရေလှူရခြင်းအကျိုး) – Na Pann San
ရေလှူ ခြင်း ကြောင့် အ ကျိုး ထူး ခဲ့သူ(ရေလှူရခြင်းအကျိုး)
Na Pann | March 15, 2020 | Knowledge | No Comments
ဗန္ဓုမ တီ ဆိုတဲ့ မြို့မှာပေါ့…..သောက်ရေ ချိုးရေ များ ၀ယ်ကြအုန်း မလားရှင် ….အမလေး …. အရှင်နေမင်း ကလည်းဆိုတာလေ ငါ့တစ်ယောက်ထဲ ကိုများ ကွက်ပြီးပူနေသလား အောက်မေ့ ရတယ် ပူလိုက်တာရေ၀ ယ်မယ့်သူက မရှိ ဗိုက်ကဆာ ညည်းလေးရဲ့ ကံကလည်း ဆိုးလိုက်တာ မိရေသည် ။
အိုး … တရားစာ ရွတ်သံတွေပါလား ….
အဟား …. ငါရောက်နေတာ သံဃာတွေ သီတင်းသုံးတဲ့ ကျောင်းသင်္ခန်းတွေရှိတဲ့ နေရာကိုး ဒါကြောင့်ရေ၀ယ်မယ့်သူမရှိတာ … တုံးပါ့ အေ ။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် သံဃာတွေကို အပြင်ကနေ ဦးချ ကန်တော့သွား ဦးမှ ….။ သြော် ကုသိုလ်မျိုးစေ့ စိုက်ပျိုးဖို့ အမြတ်ဆုံး လယ်မြေဖြစ်တဲ့ သာသနာတော် သံဃာတော်တွေ ဆိုတာနဲ့ ကြုံကြိုက်နေတာတောင် ငါ့မှာ ဘာမျိုးစေ့မှ မချနိုင်ခဲ့ပါလား ….
အမ်မယ် ညည်းက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မျိုးစေ့မချနိုင်လို့ ၀မ်းနည်းနေသေးတယ်ိ မျိုးစေ့ချရအောင် ညည်းမှာ မျိုးစေ့မှ ရှိမနေတာကို ဘယ်လိုချမတုန်း အကုသိုလ် ကြီးလေစွ မိရေသည် ။ သံသရာမှာ ညည်း ဘယ်လို အကုသိုလ်တွေများပြုခဲ့ပါလိမ့်အေ ။သူမ တစ်ဦးတည်းရေရွတ်နေခဲ့တယ် …။ ပြီးတော့သူမဆက်စဉ်းစားတယ် …..။
မကျေနပ်ဘူးကွာ ….. လုံးဝမတရားဘူး ။ သာသနာတော်နဲ့ ကြုံကြိုက်ပါလျှက်နဲ့ ဆင်းရဲလို့ ဒါနမျိုးစေ့ချခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ အဓိပါယ်ကိုမရှိတာ …။ အို …. ငါလည်း အလုပ်မရှိတိုင်း ဘာတွေတွေးပြီး မဆိုင်တဲ့ သာသနာကို အပြစ်တင်နေပါလိမ့်။ညည်းဗိုက်ဆာလို့ ရမ်းနေတာမဟုတ်လား မိရေသည်။မဟုတ်သေးပါဘူး ဒါလုံးဝ သဘာဝ မကျဘူး …
လှူဖွယ် မျိုးစေ့ ၀တ္ထုဆိုတာ …. ရွှေမှလား … ငွေမှလား …သင်္ကန်းမှလား … ဆွမ်းမှလား … ၀တ္ထုမှလား … ဒါတွေရှိမှ ကုသိုလ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ ဆိုတာကို စိုက်ပျိုးနိုင်မှာလား … မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လောကမှာ … အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရယ် … ဒါန ဆိုတဲ့ … ပြင်းပြစွာ လှူချင်တဲ့ စိတ်ရယ် … ဒီနှစ်မျိုးသာ ပြည့်စုံပါစေ … သန့်ရှင်း စင်ကြယ်တဲ့ ဘယ်အလှူဝတ္ထုကို လှူလှူ … အလှူဒါနဆိုတာ ဖြစ်တာပဲကို ဟွန်း …။
ဒီတော့ အခု အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ် သံဃာတော်တွေ ရှိနေတယ် … ငါ့မှာလှူလိုတဲ့စိတ်လဲ ပြင်းပြစွာ ရှိနေတယ် … အလှူဝတ္ထု မရှိတာနဲ့ …. ငါ့ဘ၀မှာ ဒါန ဆိုတာဆိတ်သုန်းရမှာလား … ဆိုးလိုက်တဲ့ ဘ၀ … မတရားလိုက်တဲ့လောက ။ မုန်းလိုက်တာအေ။ အင်း …. အလှူဝတ္ထု အလှူဝတ္တုဆိုတော့ ငါ့မှာ လှူနိုင်တာ ဘာရှိလဲ …. စဉ်းစားစမ်း….
ငါလိုရေသည်မတစ်ယောက်က … ရေသည်မ …. ရေ … ရေ …. ငါခပ်နေတဲ့ရေ … ဟုတ်တယ် … ရေဟာ အလှူဝတ္ထုမဟုတ်ရင်ဘာလဲ … ရေဟာ အလှူ ၀တ္ထု စစ်စစ်ပဲ …. ငါရေလှူမယ် … ငါဒီနေ့ကစပြီး ရေလှူမယ် ….. ရေးးးးးးးးး …. ဒီနေ့ကစပြီးငါရေလှူမယ်ဟေ့ ….
သူမ အကြပ်အတည်းတစ်ခုက လွတ်မြောက်သွားသလို ၀မ်းသာအားရ အသံကုန်အောင်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်ပြေးသွားတယ် … ကျောင်းသင်္ကန်းထဲက တရားရွတ်သံ သူမအော်သံကြောင့် ခေတ္တတိတ်ဆိတ်သွားတယ် …။ အဲံ့ဒိနေ့ကစပြီး ရေသည်မလေးဟာ သူ့အသက်ထက်ဆုံး နေ့စဉ်နံက် အာရုံမတက်ခင် အစောကြီး ထပြီးသံဃာတော်များရေသပ္ပါယ်တဲ့ … ရေချိုးအိမ်ထဲ နေ့စဉ် ရေအပြည့် ဖြည့်ခဲ့တယ်။တစ်ရက်မှမပျက်ခဲ့ဘူး ….
ဒီလိုနဲ့ သူမဟာသေလွန်ပြီး ( ၉၁ ) ကမ္ဘာအထက် ဘဒ္ဒကမ္ဘာ နူးတို့ ဂေါတမ ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာ ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ ဆဠာဘိည အမြင့်ဆုံး အဘိညာဉ်ရ ရဟန္တာမ အဖြစ်နဲ့ အာသဝေါ ကုန်ခမ်း ကျွတ်တမ်း ၀င် စံရပါတယ် ….. ဘွဲ့ တော်က … ဥဒကဒါယိကာ ထေရီ တဲ့ …. ထေရီဟာ … သူ့ရဲ့အတိတ်ဘ၀ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ရေလှူရတဲ့ ကုသိုလ် ကံကြောင့် ရဟန္တာ မဖြစ်ခင် ရတဲ့ အကျိုးတွေကို မြင်ခဲ့တယ် သူမြင်ခဲ့ ရခဲ့တဲ့ အကျိုးတွေကို ဒီလိုပြန်ဟောခဲ့တယ်
ငါဟာ တာဝတံသာနတ်ဘုံကိုရောက်ရတယ် နတ်သမီးတစ်ထောင်တို့တွင်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ် နတ်သမီးအားလုံးတို့ကို အာယု ၀ဏ္ဏ သုခ ယသ အဓိပတေယျ ရူပ သဒ္ဒ ဂန္ဓ ရသ ဖောဌဗ္ဗ ဆိုတဲ့ အကြောင်း တရား ဆယ်ပါးတို့ဖြင့်လွှမ်းမိုးရတယ် … ငါးကျိပ်သော နတ်မင်း တို့ရဲ့ မိဖုရား ၊နှစ်ကျိပ်သော စကြ၀တေးမင်းတို့ရဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်
ရေလှူသောဘ၀မှစပြီး အပါယ် လေးပါးမလား၊ လူ့ဘ၀နှင့်နတ်ဘ၀မှာသာ ကျင်လည် ခဲ့ရဖူးတယ် ၊ မည်သည့်ဘ၀ မည်သည့်နေရာတွက်မဆို ငါ ရေလိုလျှင် ချက်ချင်း ရခဲ့တယ် …. မိုးမရွာတဲ့အရပ် ..ကျိုက်ကျိုက်ဆူပူပြင်းတဲ့အရပ်မှာ ငါမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး … ငါ့ကိုယ်မှာ ပူလောက်ခြင်း အိုက်စပ်ခြင်း မြူ အညစ်အကြေး မဖြစ်ခဲ့ ဘူး … ရေလှူခဲ့ဖူးလို့ ငါ့ရဲ့စိတ်ဟာ ဘ၀ ဘ၀တိုင်း အလွန်စင်ကြယ်ခဲ့တယ် … ယုတ်မာတဲ့စိတ် မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး..
ယ္ခုအခါ ဒီကောင်းမှုကြောင့် အာသဝေါကုန်ခမ်း ရဟန္တာမ ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီလို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ် ….ကဲ … ဒါကတော့ပိဋကတော်လာ ရေလှူ ခြင်းအကျိုး အကြောင်း အပါဒါန် ဖြစ်ပါတယ် …။
ဗန်ဓုမတီဆိုတဲ့ မွို့မှာပေါ့…..သောကျရေ ခြိုးရမြေား ဝယျကွအုနျးမလားရှငျ ….အမလေး …. အရှငျနမေငျးကလညျးဆိုတာလေ ငါ့တဈယောကျထဲကိုမြား ကှကျပွီးပူနသေလား အောကျမရေ့တယျ ပူလိုကျတာရဝေယျမယျ့သူက မရှိ ဗိုကျကဆာ ညညျးလေးရဲ့ ကံကလညျးဆိုးလိုကျတာ မိရသေညျ ။
အိုး … တရားစာရှတျသံတှပေါလား ….
အဟား …. ငါရောကျနတော သံဃာတှေ သီတငျးသုံးတဲ့ ကြောငျးသင်ျခနျးတှရှေိတဲ့ နရောကိုး ဒါကွောငျ့ရဝေယျမယျ့သူမရှိတာ … တုံးပါ့ အေ ။ ရောကျတုနျးရောကျခိုကျ သံဃာတှကေို အပွငျကနေ ဦးခြ ကနျတော့သှား ဦးမှ ….။ သွျော ကုသိုလျမြိုးစေ့ စိုကျပြိုးဖို့ အမွတျဆုံး လယျမွဖွေဈတဲ့ သာသနာတျော သံဃာတျောတှေ ဆိုတာနဲ့ ကွုံကွိုကျနတောတောငျ ငါ့မှာ ဘာမြိုးစမှေ့ မခနြိုငျခဲ့ပါလား ….
အမျမယျ ညညျးက ကွီးကွီးကယျြကယျြ မြိုးစမေ့ခနြိုငျလို့ ဝမျးနညျးနသေေးတယိ မြိုးစခေ့ရြအောငျ ညညျးမှာ မြိုးစမှေ့ ရှိမနတောကို ဘယျလိုခမြတုနျး အကုသိုလျ ကွီးလစှေ မိရသေညျ ။ သံသရာမှာ ညညျး ဘယျလို အကုသိုလျတှမြေားပွုခဲ့ပါလိမျ့အေ ။သူမ တဈဦးတညျးရရှေတျနခေဲ့တယျ …။ ပွီးတော့သူမဆကျစဉျးစားတယျ …..။
မကနြေပျဘူးကှာ ….. လုံးဝမတရားဘူး ။ သာသနာတျောနဲ့ ကွုံကွိုကျပါလြှကျနဲ့ ဆငျးရဲလို့ ဒါနမြိုးစခေ့ခြှငျ့မရှိဘူးဆိုတာ အဓိပါယျကိုမရှိတာ …။ အို …. ငါလညျး အလုပျမရှိတိုငျး ဘာတှတှေေးပွီး မဆိုငျတဲ့ သာသနာကို အပွဈတငျနပေါလိမျ့။ညညျးဗိုကျဆာလို့ ရမျးနတောမဟုတျလား မိရသေညျ။မဟုတျသေးပါဘူး ဒါလုံးဝ သဘာဝ မကဘြူး …
လှူဖှယျ မြိုးစေ့ ဝတ်ထုဆိုတာ …. ရှမှေလား … ငှမှေလား …သင်ျကနျးမှလား … ဆှမျးမှလား … ဝတ်ထုမှလား … ဒါတှရှေိမှ ကုသိုလျဆိုတဲ့မြိုးစေ့ ဆိုတာကို စိုကျပြိုးနိုငျမှာလား … မဖွဈနိုငျဘူး။ လောကမှာ … အလှူခံပုဂ်ဂိုလျရယျ … ဒါန ဆိုတဲ့ … ပွငျးပွစှာ လှူခငျြတဲ့ စိတျရယျ … ဒီနှဈမြိုးသာ ပွညျ့စုံပါစေ … သနျ့ရှငျး စငျကွယျတဲ့ ဘယျအလှူဝတ်ထုကို လှူလှူ … အလှူဒါနဆိုတာ ဖွဈတာပဲကို ဟှနျး …။
ဒီတော့ အခု အလှူခံ ပုဂ်ဂိုလျ သံဃာတျောတှေ ရှိနတေယျ … ငါ့မှာလှူလိုတဲ့စိတျလဲ ပွငျးပွစှာ ရှိနတေယျ … အလှူဝတ်ထု မရှိတာနဲ့ …. ငါ့ဘဝမှာ ဒါန ဆိုတာဆိတျသုနျးရမှာလား … ဆိုးလိုကျတဲ့ ဘ၀ … မတရားလိုကျတဲ့လောက ။ မုနျးလိုကျတာအေ။ အငျး …. အလှူဝတ်ထု အလှူဝတ်တုဆိုတော့ ငါ့မှာ လှူနိုငျတာ ဘာရှိလဲ …. စဉျးစားစမျး….
ငါလိုရသေညျမတဈယောကျက … ရသေညျမ …. ရေ … ရေ …. ငါခပျနတေဲ့ရေ … ဟုတျတယျ … ရဟော အလှူဝတ်ထုမဟုတျရငျဘာလဲ … ရဟော အလှူ ဝတ်ထု စဈစဈပဲ …. ငါရလှေူမယျ … ငါဒီနကေ့စပွီး ရလှေူမယျ ….. ရေးးးးးးးးး …. ဒီနကေ့စပွီးငါရလှေူမယျဟေ့ ….
သူမ အကွပျအတညျးတဈခုက လှတျမွောကျသှားသလို ဝမျးသာအားရ အသံကုနျအောငျပွီး ပြျောရှငျစှာ ကခုနျပွေးသှားတယျ … ကြောငျးသင်ျကနျးထဲက တရားရှတျသံ သူမအျောသံကွောငျ့ ခတ်ေတတိတျဆိတျသှားတယျ …။ အဲံ့ဒိနကေ့စပွီး ရသေညျမလေးဟာ သူ့အသကျထကျဆုံး နစေ့ဉျနံကျ အာရုံမတကျခငျ အစောကွီး ထပွီးသံဃာတျောမြားရသေပ်ပါယျတဲ့ … ရခြေိုးအိမျထဲ နစေ့ဉျ ရအေပွညျ့ ဖွညျ့ခဲ့တယျ။တဈရကျမှမပကျြခဲ့ဘူး ….
ဒီလိုနဲ့ သူမဟာသလှေနျပွီး ( ၉၁ ) ကမ်ဘာအထကျ ဘဒ်ဒကမ်ဘာ နူးတို့ ဂေါတမ ဘုရားရှငျလကျထကျမှာ ပဋိသမ်ဘိဒါပတ်တ ဆဠာဘိည အမွငျ့ဆုံး အဘိညာဉျရ ရဟန်တာမ အဖွဈနဲ့ အာသဝေါ ကုနျခမျး ကြှတျတမျး ဝငျ စံရပါတယျ ….. ဘှဲ့တျောက … ဥဒကဒါယိကာ ထရေီ တဲ့ …. ထရေီဟာ … သူ့ရဲ့အတိတျဘဝကိုကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါမှာ ရလှေူရတဲ့ ကုသိုလျ ကံကွောငျ့ ရဟန်တာ မဖွဈခငျ ရတဲ့ အကြိုးတှကေို မွငျခဲ့တယျ သူမွငျခဲ့ ရခဲ့တဲ့ အကြိုးတှကေို ဒီလိုပွနျဟောခဲ့တယျ
ငါဟာ တာဝတံသာနတျဘုံကိုရောကျရတယျ နတျသမီးတဈထောငျတို့တှငျအမွတျဆုံးဖွဈတယျ နတျသမီးအားလုံးတို့ကို အာယု ဝဏ်ဏ သုခ ယသ အဓိပတယြေ ရူပ သဒ်ဒ ဂန်ဓ ရသ ဖောဌဗ်ဗ ဆိုတဲ့ အကွောငျး တရား ဆယျပါးတို့ဖွငျ့လှမျးမိုးရတယျ … ငါးကြိပျသော နတျမငျး တို့ရဲ့ မိဖုရား ၊နှဈကြိပျသော စကွဝတေးမငျးတို့ရဲ့မိဖုရားကွီးဖွဈခဲ့ရတယျ
ရလှေူသောဘဝမှစပွီး အပါယျ လေးပါးမလား၊ လူ့ဘဝနှငျ့နတျဘဝမှာသာ ကငျြလညျ ခဲ့ရဖူးတယျ ၊ မညျသညျ့ဘ၀ မညျသညျ့နရောတှကျမဆို ငါ ရလေိုလြှငျ ခကျြခငျြး ရခဲ့တယျ …. မိုးမရှာတဲ့အရပျ ..ကြိုကျကြိုကျဆူပူပွငျးတဲ့အရပျမှာ ငါမဖွဈခဲ့ဖူးဘူး … ငါ့ကိုယျမှာ ပူလောကျခွငျး အိုကျစပျခွငျး မွူ အညဈအကွေး မဖွဈခဲ့ ဘူး … ရလှေူခဲ့ဖူးလို့ ငါ့ရဲ့စိတျဟာ ဘ၀ ဘဝတိုငျး အလှနျစငျကွယျခဲ့တယျ … ယုတျမာတဲ့စိတျ မဖွဈခဲ့ဖူးဘူး..
ယ်ခုအခါ ဒီကောငျးမှုကွောငျ့ အာသဝေါကုနျခမျး ရဟန်တာမ ဖွဈခဲ့ရလပွေီလို့ဟောကွားခဲ့ပါတယျ ….ကဲ … ဒါကတော့ပိဋကတျောလာ ရလှေူ ခွငျးအကြိုး အကွောငျး အပါဒါနျ ဖွဈပါတယျ …။
ခု လက်ရှိ အချိန်မှာပဲ မိမိ ရှာနိုင် သလောက်ငွေ ကို မကုန်အောင် သုံးတဲ့ နည်းလမ်း ( ၇ ) ခု
နေ စရာ အိမ်ဆောက်မယ် ဆို ရင် လိုက်လုပ်ဖို့မပြော နဲ့သိတဲ့သူတောင် အတော်နည်းသွားပြီဖြစ် တဲ့ အိမ်ဆောက်နည်းများ
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ အချို့ဟာ (၂၄) ရက်အကြာမှ လက္ခဏာပြကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
ကမ္ဘာ ကျော်နာမည်ကြီး Brand တွေတောင် ထိုင်ငို သွားရမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်တန်ပွဲတက်ဝတ်စုံများ